Momba anay - Kingtone Glass Products Co., Ltd.
Xuzhou Kingtone Packing dia mpamatsy entana voalohany amin'ny fonosana vera manokana sy manokana ho an'ny sakafo sy zava-pisotro, indostrian'ny fikolokoloana tena manokana. Xuzhou Kingtone Glass Products Co., Ltd no departemantan'ny varotra iraisam-pirenena an'i Dahua. Niorina tamin'ny taona 1985 izahay ary manana traikefa fanamboarana 20 taona mahery. Manana traikefa amin'ny famokarana matihanina be dia be izahay ary manana haitao matanjaka sy fitaovana fanodinana mandroso. Izahay dia manamboatra vokatra hatrany araka ny fenitry ny fanjakana ary ny vokatra dia malaza any Shina noho ny kalitao avo lenta. Nahomby izahay ISO9001: 2000 Certification. Ny mpanjifanay dia manerana an'izao tontolo izao, firenena 100 mahery.
izahaynaorina tamin'ny 1985 ary manana traikefa fanamboarana 20 taona mahery. Manana traikefa amin'ny famokarana matihanina be dia be izahay ary manana haitao matanjaka sy fitaovana fanodinana mandroso.
"Ny kalitao avo indrindra, ny vidiny mirary ary ny serivisy aorinan'ny varotra lehibe" no foto-kevitray, "Fahafaham-pon'ny mpanjifa" no tanjontsika mandrakizay; Ny vokatray dia eken'ny besinimaro amin'ny tsena maro eto an-trano sy manerantany.
Manana laza tsara izahay amin'ny fanomezana asa-tanana sy serivisy kalitao. Mandritra izany fotoana izany dia mbola mitazona ny vidiny amin'ny ambaratonga mifaninana amin'ny mpividy izahay mba hananan'izy ireo fotoana sy tombony bebe kokoa eo amin'ny tsena.
Faritra fanatobiana entana
Manana traikefa mihoatra ny 20+ taona mahery izahay
Manokana, Xuzhou Jintong dia manome tavoahangy fitaratra sy kojakoja isan-karazany (satroka fitetezana, paompy famafazana, satroka boribory, tehina fary, corks ary satroka). Manana traikefa efa ho 20 taona tamin'ny indostrian'ny fonosana izahay ary afaka manome vokatra fonosana fitaratra avo lenta sy manavao ho an'ny marika hatsaran-tarehy sy fikolokoloana hoditra.
Ny toeram-pamokarana mandroso rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitra US ary voamarina amin'ny FDA, mba hahafahantsika manome ny filan'ny mpanjifa anatiny sy iraisam-pirenena. Ho fanampin'izany, ny orinasa dia manana pirinty, sary hosodoko, fanamaivanana, haitao elektrôlika koa, hihaonana amin'ny filan'ny mpanjifa ao an-toerana sy avy any ivelany. Manana trano fitahirizana mihoatra ny 60.000 metatra toradroa izay itahirizanay vokatra mihoatra ny 20 tapitrisa hahazoana antoka ny fahafaham-pon'ny mpanjifa eo noho eo. ary mitazona fotoana fohy fandefasana.